यी ४ कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रामा ब्रेक ! | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal यी ४ कारणले प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रामा ब्रेक ! | एक्सप्रेस | GNN Nepal
प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना
प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा कुन कुरा बोल्ने त्यसको छिनोफानो त्यहाँको जनमास हेरेर गर्छन् ।
फागुन १२ गते, २०७७ १७:१८ मा प्रकाशित
जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यात्रामा अब ब्रेक लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उनको यात्रामा ब्रेक लगाइदिएको छ । संयोग के भने सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो ७० औं जन्मदिवस मनाइरहेका ओलीलाई अदालतको फैसलाले राजनीतिक पराकम्पन ल्याइदियो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला गर्यो रे भन्ने समाचार कानमा पर्नेबित्तिकै उनी छाँगाबाट खसेझैं भए ।
क्रूर शासक बन्दै प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एकीकृत नेकपा विभाजित भयो । जसमा केपी ओली समूह र प्रचण्ड-नेपाल समूह गरी दुई समूहहरु फरक कित्तामा देखिए । एक समूह (ओली) देशभर चुनावी माहोल लिएर आम सभा गर्ने र अर्को समूह (प्रचण्ड माधव) भने आन्दोलनको माहोल लिएर आम सभा गर्ने होडबाजी चलिरहेको थियो । तर यी दुबैमा एक कुरा भने समान देखिए । दुबै समूह एकैसाथ सडकमा देखा परे । लामो समयदेखि सिंहदरबारबाट बाहिर ननिस्केका नेता तथा मन्त्रीहरु यसपछि दैनिकजसो सडकमा देखिन्थे ।
ओली समूह ताजा जनादेशलाई सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना टार्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । काठमाडौंको नारायणहिटी अगाडि भएको विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली आफैंले भनेका थिए, ‘अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो’, ‘जनता के भन्छ, चुनाव ले भन्छ ।’ त्यतिबेलासम्म ओलीको मुहारमा खुसी नै देखिन्थ्यो । किनभने उनको कार्यक्रममा जनमास पनि व्यापक नै थियो ।
अदालत र आयोगलाई धम्की
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचनको माहोल लिएर देशदौडाहामा हिँडिरहेका थिए । सोही क्रममा फागुन ८ गते शनिबार विराटनगरमा आयोजित विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्न उनी विराटनगर पुगेका थिए । सभामा उनले भनेका थिए, ‘‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस् । त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस् स्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सो मुद्दाको बहस सकिएको भोलिपल्ट उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए । यस्तै अभिव्यक्ति प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि बारम्बार दिइरहेको थियो । उसले सडकमा देखिएको व्यापक जनमासलाई अदालतले देखेको होला भन्दै अदालतलाई धम्क्याउँदै आएको थियो ।
आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन हुने मिति तय भएपछि निर्वाचन आयोग धुमधामका साथ निर्वाचनको तयारीमा थियो । कहाँसम्म भने निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु खरिदका लागि आयोगले मंगलबार बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी गरिसकेको थियो । तर मंगलबार नै अदालतले यस्तो फैसला गरेपछि अब आयोग यो प्रक्रियाबाट ब्याक भएको छ । निर्वाचनलाई लिएर गरिएका सबै प्रक्रिया आयोगले स्थगित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्ति आउनुअघि अदालत र आयोग उनको पक्षमा रहेर नै प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य न्यायाधीशहरुले नै उनको बचाउ गरेका थिए । उनीहरुले ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सक्दिन जनतामा जाउँ भन्दा के फरक पर्छ रु’ भनेर उनको बचाउ गरिहेका थिए । अदालतलाई लिएर यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए नतिजा अर्कै आउथ्यो कि रु
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रचण्ड नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई उनको निवासबाटै पक्राउ गरियो । देशभर आन्दोलनको माहोलका क्रममा झाँक्रीले गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लिएर एक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । त्यसपछि झाँक्रीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले छलफलका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गर्‍यो ।
तर झाँक्री प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी थालियो । सोही तयारीअनुरुप महानगरीय अपराध महाशाखाले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । र उनलाई उनको निवासबाटै गिरफ्तार गरियो । उनको गिरफ्तारपछि सत्तापक्ष बाहेक राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मले सर्वत्र विराध गरेपछि ५ घण्टाभित्रमा झाँक्री रिहा भइन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो स्टेपले उनको यो यात्रामा ब्रेक लाग्यो ।
‘बाजे वकिल’ प्रकरण
बबरमहलको कार्की ब्यांक्वेटमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक अभिव्यक्ति दिएका थिए– ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, अदालतमा तमासा देखाउन ।’ उनले ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि यस्तो अभिव्यक्ति दिनसम्म भ्याए । प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेर वरिष्ठ अधिवक्तामाथि यस्तो अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर ओलीले माफी मागेनन् । उनमा दम्भ बढी नै भएको देखियो ।
प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक कार्यक्रममा कुन कुरा बोल्ने त्यसको छिनोफानो त्यहाँको जनमास हेरेर गर्छन् । उनलाई भीडले के बोल्ने र कस्ता कुरा बोल्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्छ । व्यापक जनमास भयो भने उनी आफ्नो कामको बखान गर्छन् भलै त्यो पूरा भएको होस् । तर जनमास कमै छ भने उनी कमेडी र उखानका कुरा बढी गर्छन् । र दर्शक हँसाउँछन् । उनको यो खुबी हो ।
उनको समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशाल जनमासमा पनि उनको शैली यस्तै थियो । त्यस दिन उनी उखान, टुक्का र कमेडीमा प्रवेश नै गरेनन् । उनी सरकारले आजसम्म गरेका कामको बखान गर्दै थिए ।
महतारा जीएनएन नेपालका संवाददाता हुन् ।
फागुन १६ गते, २०७७
नेकपा संकट : दाहालको प्रस्तावमा छलफल चलाउने कि फिर्ता गर्ने ?
कार्तिक ३० गते, २०७७
दमकमा एक साता थपियो लकडाउन